Fikarohana momba ny firaisana Fitiavana sy tantaram-piainana taloha: Planin'ny fanahy, fahatsiarovan-tena sy fahatsiarovana ara-jeografia tranga momba ny fananganana toe-batana Tiorka an'i Abit Suzulmus | Ismail Altunkalic - Fikarohana Reincarnation
Ny famonoana ny mpamboly sy ny vadiny
Nipetraka tao amin'ny Suzendale Adana, Torkia, ao amin'ny distrikan'i Bey. Tsy fantatra ny datoratany nahaterahany, saingy heverina fa teraka tamin'ny 1912 izy. Namboly voankazo sy legioma izy ary nahavita tsara trano roa. Afaka nanakarama olon-kafa koa izy mba hanampy azy hiasa amin'ny taniny.
Nanambady indroa i Abit. Ny vadiny voalohany, Hatice, dia tsy nitondra zaza, ka dia naka vady faharoa Sehide izay nanana zanaka dimy niaraka taminy izy. Abit ny vadiny roa dia nipetraka irery tao amin'ny tranony roa. Ny trano dia metimety 350.
Tamin'ny Janoary 31, 1957, Abit, tao an-tranony izay niainan'i Sehide dia nilazan'ny iray tamin'ireo mpiasa taminy fa narary ny iray tamin'ireo biby fiompiny. Sehide dia bevohoka sivy volana tamin'izany fotoana izany ary nanomboka niasa. Nandeha niaraka tamin'ny mpiasa tany amin'ny toeram-pilalaovana ny habibiana mba hikolokolo ny biby. Rehefa niondrika i Abit mba handinika ilay biby, dia notifirina tamin'ny lohany mafy izy. Abit dia novonoin'ity famelezana ity teo am-baravarankely raha teo amin'ny 45 taona izy.
Rehefa tsy tafaverina tao an-trano izy dia nandeha tany amin'ny tranobongo i Sehide mba hijery ny fanemorana Abit. Sehide dia novonoina niaraka tamin'ny matoera, toy ny any amin'ny zanany, Zihni sy Ismet.
Olona marobe no nosamborina noho ny heloka bevava, saingy ny roa, fantatra amin'ny anarana hoe Ramazan sy Mustafa, dia voaheloka noho ireo vono olona. Nihantona izy ireo tamin'ny farany.
Drafitra fanahy sy fanahy: nofy manambara ny fiverenan'i Abit
Mehmet Altinkilc sy Nebihe vadiny dia nipetraka tao amin'ny fizarana Midikan'i Adana, Torkia. Ny mpifanila-bodirindrina iray, Fatma Tanrisven, izay niaina metatra metatra na metatra vitsivitsy avy amin'ny fianakaviana Altinkilc, dia nanonofy ny Altinkilcs.
Tao amin'ny nofin'i Fatma, Abit Suzulmus, ilay lehilahy novonoina tany Adana niaraka tamin'ny vadiny sy ny zanany roa, dia nipetraka tao an-tranon'i Mehmet Altinkilc. Telo lahy nandeha teny amin'ny arabe ivelan'ny tranony Altinkilc no niantso an'i Abit ary nangataka azy hivoaka ny trano. Namaly i Abit:
"Tsia, hijanona eto aho fa tsy hiverina." (1)
Fatma dia nilaza tamin'i Mahmut vadiny, momba ilay nofy ary ny ampitso dia nandeha tany an-tranon'i Mehmet Altinkilc izy mba hizara ilay nofy miaraka aminy. Ary hitan'i Nebià vadiny fa bevohoka i Mehmet. Na i Fatma na Mahmut dia nahafantatra fa niandry zaza i Nebihe.
Rehefa fantatr'i Mahmut fa bevohoka i Nebihe, dia nandika ny nofinan'ny vadiny izy mba hilaza fa zazalahy i Nebihe ary ho lasa Abit Suzulmus reincarnated. Mahmut dia nilaza tamin'i Mehmet sy Nebihe Altinkilc momba ny nofinidin'ny vadiny sy ny faminaniany fa ho teraka i Abit.
Mehmet dia nahafantatra hoe iza no Abit Suzulmus, tsy avy amin'ny dokambarotra vokatry ny vono olona, ​​fa koa satria i Mehmet sy Abit dia nanao raharaham-barotra tamin'ny lasa. Ho an'i Mehmet anefa, mpinamana fotsiny i Abit, fa tsy namana. Nandritra ny fanadihadiana momba ity tranga ity, dia nilaza i Mehmet fa tsy fantany ny tsipiriany momba ny fiainan'i Abit. Ohatra, nilaza i Mehmet fa tsy fantany ny anaran'ireo zanaky Abit na ireo havany hafa.
Fanamarinana ny fahatsiarovana ny fiainan'i Ismail Altinkilic
Nebihe Altinkilic dia nanan-janaka lahy teraka tamin'ny 30 1957, sivy volana taorian'ny namonoana an'i Abit Suzulmus. Mehmet sy Nebihe no nantsoiny hoe Isima. Fony izy efa-taona sy tapany taorian'izay, raha vao nanomboka niresaka sy nandeha izy, dia nanomboka nitantara ny fiainany taloha toa an'i Abit Suzulmus i Ismail.
Talohan'ny razambe taloha niainan'i Ismail, avelao aho hanazava fa i Ian Stevenson dia nanamarina tamin'ny fomba ofisialy ireo fanambarana ireo ho marina ara-tantara. Ao amin'ny bokiny, Ireo trangan-javatra momba ny karazana gikan-tany: Libanona sy Tiorkia, I Stevenson dia manolotra takelam-pandaharana lehibe 15 izay mamaritra ny vavolombelony na loharano hafa, toy ny rakitsoratry ny polisy, izay nampiasaina hanamarinana ny fahatsiarovan'i Ismail. (2)
Fahatsiarovana ny fiainany taloha: miteny Ismail ny fiainany sy ny famonoana azy ho Suzilmus Aboul
Mehmet, rain'i Ismail, dia nitantara fa raha afaka miteny tsara i Ismail, dia niresaka momba ny fiainany taloha tahaka an'i Abit Suzulmus izy. R. Bayer, mpiara-miasa amin'i Ian Stevenson, nanoratra ny filazan'i Mehmet mikasika ny fiverenan'ny hetsika. Misy ampahany amin'ny dikanteny eto ambany:
"Indray hariva aho dia niditra an-tsehatra avy amin'ny asa tena reraka ary naninjitra ny sofina. Niara-nipetraka teo akaikiko i Ismail ary lasa nanatona ahy izy. Tena reraka aho, hoy aho, mba hanesorana azy:
'Ismail, reraka mafy aho. Andehana mandeha.'
Namaly izy hoe:
'Tsia tsia. Izaho tsy Ismail. I Abit. '
... Tezitra tamin'io hadalàna io aho ary nanandrana indray ny handefa azy hiala sy hibata azy. Saingy nanizingizina izy fa Abit io. Dia nanontaniako izy raha maty na nanambady.
[Namaly izy hoe:]
'Fa ny Papa, manana vady roa aho. Ny iray dia antsoina hoe Hatice sy ny Sehide hafa. '
[Dia hoy aho:]
'Manan-janaka ve ianao, ry zanako?'
Ary hoy izy namaly:
'Eny ry Papa. Eny eny. Gulseren, Zeki ary Hikmet. '
Nilaza ihany koa izy fa trosa ny trosan'ny olona samihafa, hoy ny filazan'i Saban, Abdurrezzak, ary olon-kafa an'i Akkapi [distrika hafa ao Adana]. Nitarainay koa ny fahantrantsika, ary nanampy izy fa nanantena izy fa hanonitra ny trosa. "(3)
Nolazain'i Ismail tamin'ny rainy ihany koa ny namonoana an'i Abit. Nilaza i Ismail fa niteny taminy i Ramazan fa malemy ny ombilahy iray, ka izany no nahatonga azy, Abit nandeha tany amin'ny trano miorina.
Rehefa niondrika i Abit mba handinika ny omby, dia namono azy i Ramazan rehefa nokapohiny tamin'ny lohany ny vy, izay novolavolaina toy ny matanjaka. Nampiasa ny rantsantanany i Ismail mba hampisehoana amin'ny rainy ny zavatra tahaka ny tohatra.
Nanazava tamin'ny rainy i Ismail fa i Abit dia nanana vady roa izy, satria tsy afaka nitondra zaza ny vadiny voalohany. Nilaza koa izy fa tena tsara tarehy i Sehide vadiny. Nilaza izy fa niasa toy ny mpamboly legioma izy ary tao amin'ny zaridainy, nanana hazo fihinam-boa izy, anisan'izany ny hazo zaridaina sy kavina.
Nilaza i Ismail fa manana ombivavy i Abit, ary io ombivavy io dia nantsoina hoe "Susan." Nolazainy fa fony izy vao tafaverina dia nanana soavaly roa izy. Tao amin'ny toeram-pilaminana, nilaza i Ismail fa manana toera-fodiana izy ary nametraka fandriana tao amin'ny trano miorina. Ian Stevenson dia afaka nanamarina fa marina avokoa ireo fahatsiarovana rehetra ireo.
Fahatsiarovana ny fiainana tany am-piandohana: nahita ny fiainany taloha i Ismail
Nanohy nanantitrantitra i Ismail fa Abit ny anarany ary nangataka izy fa nentina tany an-tranony sy ny fianakavian'i Abit. Fianakavian'i Abit nandre ny filazan'i Ismail ary ny vadin'i Abit mivady, Hatice, ary ny zanany vavy, Gulseren, dia nitsidika azy tany an-tranon'i Mehmet sy i Nebihe. Nofehezin'i Ismail ho azy ireo ny fifandraisana ara-pihetseham-po.
Raha efa telo taona i Ismail, dia nanapa-kevitra i Mehmet raha afaka mahita ny tranon'i Abit i Ismail. Tsarovy fa niaina tao amin'ny distrikan'i Bey tao Adana i Abit ary i Mehmet sy ny fianakaviany dia nipetraka tao amin'ny distrikan'i Midik. Ny elanelana misy ny distrikan'i Bey sy Midik dia manodidina ny 2 kilometatra na kely monja ny iray kilaometatra.
Na dia nanana trano roa aza i Abit, i Ismail dia nitarika ny lalana tamin'ny halaviran'ny kilometatra 2 mivantana avy hatrany tao an-trano izay namonoana an'i Abit, na dia mbola tsy tany amin'ny trano fonenan'i Abit akory aza i Ismail tamin'ny androm-piainany. Tao no nahafantarany ny olona izay nahafantatra an'i Abit sy ny toerana nahitana an'i Abit.
Izany dia mampahatsiahy ny Anne Frank | Barbro Karlen raharaha, toa i Barbro, tamin'ny taona 10, dia afaka nitarika ny ray aman-dreniny tao amin'ny trano fandraisam-bahiny tao amin'ny arabe feno rivotra tao Amsterdam mivantana tany amin'ny Anne Frank House, na dia mbola tsy tany Amsterdam aloha. The Frank | Mampiseho izany koa ny tranga Karlen Ny endriky ny endrika dia afaka mitoetra ho tsy miovaova Hatramin'ny androm-piainany iray manontolo, ary izany Mety hiova ny fivavahana, ny zom-pirenena sy ny foko avy amin'ny fampidirana iray mankany amin'ny iray hafa.
Fahatsiarovana ny fiainany taloha: Misedra Goose ny dadatoa Mahmut rehefa nanoritsoritra ny fisotroan-dry zareo miaraka amin'ny vehivavy i Ismail
Niteny tamin'ny rainy i Ismail fa i Abit dia tiany ny hisotro raki, izay fisotroan-dronono mahery atao any Torkia, ary tiany ny hisotro raki miaraka amin'ny namany. Namantatra ny namana iray nisotro toaka i Abdurrezzak, izay marina. Abdurrezzak Baydar dia nisotro raki tanteraka niaraka tamin'i Abit.
Nilaza ihany koa izy fa hisotro raki isanandro miaraka amin'ny dadatoany izy, izay ny anarany dia Mahmut Altinkilic. Nanazava i Ismail fa niara-niasa tamin'ny voankazo sy legioma izy, tahaka an'i Abit, sy ny dadany Mahmut. Ankoatr'izany dia nanana zaridaina izy ireo ary te-hisotro ny fisotroan-dry zareo. Nanamarika i Ismail fa raha misotro izy sy Mahmut, dia hanangom-bolo amin'ny sama izy ireo.
Ankoatra izany, nilaza i Ismail fa izy, Abit, ary Dadat Mahmut, dia hanasa ny vehivavy amin'ny fisotroan-dronono.
Rehefa naheno an'i Abit i Mahmut Altinkilic dia nanoritsoritra fa nanam-bady ho an'ireo antoko izy, nilaza izy fa nipoitra tsikelikely. Nanazava i Mahmut fa azony antoka fa tsy misy olon-kafa afa-tsy Abit ary fantany ny momba ireo vehivavy izay nanasa azy ireo ho ao amin'ny zaridaina. Io zava-miafina manokana io no nahafantaran'i Ismail, izay tsy hay hazavaina afa-tsy tamin'ny alalan'i Ismail no ho teraka indray ao Abouz, izay nahatonga ny nofon'i Mahmut ho toy izany.
Fahatsiarovana ny fiainany taloha: Ismail dia nahatsiaro ny olona izay nanefa azy vola tao amin'ny fiainany talohan'ny nahafatesany
Niteny tamin'ny rainy i Ismail fa tamin'ny fotoana nahafatesany fony izy Abit, olona maro no nanefa vola taminy. Nilaza izy fa ny roa tamin'ireo olona nanan-trosa no nantsoina hoe Abdurezzak sy Sabit.
Abdurezzak Baydar dia niaiky fa tamin'ny fotoana nahafatesan'i Abit, dia nanome vola ny Abit 200 Turkish lira izy ary nilaza i Sabit Devici fa tokony ho ny fialan-tsasatra 200-300 Tiorka i Abit rehefa maty izy. Indray, marina ny fahatsiarovan'i Ismail.
Rehefa fantatr'i Sabit Devici ny filazan'i Ismail fa ho teraka indray ao amin'ny vatana vaovao, dia nitady azy i Sabit. Tsy mbola nihaona tamin'i Ismail mihitsy i Sabit talohan'io ary i Ismail, tamin'ny vanim-potoana nahaterahany ankehitriny, dia mbola tsy nihaona tamin'i Sabit. Sabit voalohany dia nihaona tamin'i Ismail raha tsy teo ny reniny, ny rainy, na ny hafa izay afaka namantatra an'i Sabit i Ismail. Sabit nanontany an'i Ismail hoe iza izy sy i Ismail namaly, "Sabit." (4)
Fahatsiarovana ny fiainany taloha: Ismail dia mamerimberina mamaky ny fiainany taloha Namana, Rasit, ilay mpivaro-kena
Raha efa telo taona teo ho eo i Ismail, dia nahafantatra tsara sy fantatra amin'ny anarana hoe Rasit Tathci ​​izy, izay mpanamboatra gilasy, araka ny nandehan'i Rasit. Nankany Rasit i Ismail ary tsy hoe Rasit irery ihany, fa nilaza ihany koa i Rasit ny anaran'ny vadiny sy ny zaza maromaro. Rasit dia niaiky ny fanekena an'i Ismail azy satria i Rasit dia nipetraka tany amin'ny distrikan'i Bey, raha nahita an'i Ismail tany amin'ny distrikan'i Medik, toerana nivarotany gilasy. Rasit dia tsy nihevitra fa nisy olona nahafantatra azy tao amin'ny distrikan'i Medik.
Ismail koa dia niantso an'i Rasit ho toy ny "kirve." Izany dia manan-danja satria i Abit dia namana akaikin'i Rasit ary tokony hatao ho "kirve", na mpanohana, ny lanonana famoràna ny zanaky Rasât. Amin'ny fiantsoana an'i Rasit a kirve, toa i Ismail dia navadika ny andraikitra rehefa nodimandry i Abit, kanefa mbola marina ihany fa izy dia nanamarina ny anarana Rasit tamin'ny anarany ary nanondro ny andraikitra iray manan-danja ho an'i Rasit sy ny namany taloha, Abit.
Azafady ihany koa i Ismail afaka namantatra ny zanak'i Rasit, Ali Tathci. Rehefa nahita an'io lehilahy io i Ismail dia niteny hoe:
"Antsoina hoe Ali io lehilahy io, ary niara-niasa taminy aho." (5)
Niara-niasa tamin'ny rainy mivarotra mofomamy i Ali, saingy niasa ho an'ny Abit ihany koa izy tao anatin'ny saha sy ny voankazo.
Fahatsiarovana ny fiainany taloha: Nanaiky ny sezan'ny Abit ny Ismail ary nanaiky hitranga tamim-pahamendrehana
Nitsidika fivarotana fivarotam-pianakaviana iray izay nantsoina hoe Kapiciobul ny fianakaviany. Raha nitsidika ny fivarotana isan'andro i Abit, dia nitaraina izy fa tsy misy seza ho azy. Ho setrin'izany, nisy seza iray nentina manokana ho an'ny Abit, mba hahafahany mipetraka rehefa nitsidika ny fivarotana izy.
Rehefa nahare ny fangatahan'i Ismail ho teraka indray ny Abit Suzulmus ireo rahavavin'i Kapiciobul, dia nandefa hafatra tamin'ny rain'i Ismail izy ireo mba hitondra azy any amin'ny fivarotana, mba hahafahan'izy ireo mihaona aminy.
Rehefa nentina tany amin'ny fivarotana i Ismail, dia nandeha nivantana tany amin'ny seza natokana ho an'ny Abit. Rehefa nanontaniana izy ny antony nipetrahany tao amin'io seza io, dia namaly i Ismail fa matetika izy no nipetraka teo ary ny azy no seza.
Mba hitsapana an'i Ismail, iray tamin'ireo rahalahy antsoina hoe Ibrahim dia nanontany an'i Ismail:
"Manjary vola aminao ve aho?" Hoy i Ismail namaly, "Tsia, ny mifanohitra amin'izany, izaho dia tokony ho anao 100 lira." (6)
Ny fanambaràn'i Ismail dia marina. Ny Abit dia nanan-trosa ny Kapiciobul brothers 100 lira.
Ny fanoloran-kevitr'i Ismail tamin'ny fomba niainany taloha ny hoe Suzulmus niala
Raha mbola zaza i Ismail, dia nanindry mafy fa miantso azy hoe Abit ny fianakaviany. Rehefa enin-taona izy ary tonga ny fotoana hiditra an-tsekoly, dia nangataka izy hisoratra anarana ho Abit Altunkalic, fangatahana nanaiky ny rainy.
Rehefa fito taona izy, tamin'ny fotoana nihaonan'i Ian Stevenson voalohany, dia mbola tsy namaly azy i Ismail raha tsy nomena azy ho Abit. Na dia efa lehibe aza i Ismail, dia nifikitra tamin'ny anarana i Ismail ary rehefa nifankahita tamin'i Ismail tao amin'ny 1973 Ian Stevenson, fony izy 16 taona, dia nasehony an'i Stevenson ny karatra maha izy azy, izay nantsoina hoe Abit ny anarany voalohany.
Ny fifandraisan'i Ismail amin'ny anarana Abit dia mampahatsiahy ny raharaha Francesco Foscari | Wayne Peterson. Mbola kely i Wayne dia tsy nety namaly ny anarany hoe Wayne. Rehefa nanontany ny zavatra tiany hantsoina ny ray aman-dreniny, dia nanambara izy fa Francesco Foscari no anarany, na dia tsy azony akory aza ny nahazoany anarana. Amin'ny maha-zatovo azy, i Wayne aza dia nihevitra fa nanova ny anarany ho Francesco Foscari. Naharitra im-polo taonany maro i Wayne hahatsapa fa teo amin'ny fiainany taloha dia izy no Francesco Foscari.
Fihetseham-po taloha: Ny fitiavan'i Ismail ny fianakaviana Suzulmus
Ian Stevenson dia nanamarika fa nanana fifandraisana goavana sy maharitra tamin'ny fianakavian'i Abit i Ismail. Rehefa nahita sakafo fihinam-boto tsara tao amin'ny fivarotan-drainy i Ismail, dia nangataka ny rainy izy mba hanomana azy io ary alefany any amin'ny zanaky Abit. Rehefa nandà ny rainy, dia nitomany nandritra ny ora maro i Ismail ary tsy nihinan-kanina. Nomeny ny rainy tamin'ny farany ary nandray ny hena ho an'ny fianakaviana Suzulmus. Nanontany ny rainy koa i Ismail mba handefa pastèques ho an'ny fianakavian'i Abit, izay nanohitra ny rainy koa.
Tao amin'ny 1964, rehefa nianatra momba ny fahafatesan'ny renin'i Abit i Ismail, dia nitomany izy ary nandeha natory tsy nihinan-kanina. Rehefa tafiditra tao amin'ny tafika i Zeki zanak'i Abit, ary nandao an'i Adana, dia tezitra i Ismail raha tsy nampahafantarina na nanontaniana momba izany izy.
Indray mandeha, rehefa nitsidika ny tranon'ny Suzulmus i Ismail, ny zanakavavin'i Abit, Hekmit, dia nitazona ny tànan'i Ismail. Avy eo dia nilaza tamin'i Hekmit izy fa zanany vavy izy ary an'ny trano sy ny zaridaina
Nandritra ny androm-piainany teo amin'ny fiainany dia nitaky ny hiara-hiaina amin'ny fianakaviana Suzulmus i Ismail. Na dia tsy nahazo izany aza izy ireo, dia nitsidika ny fianakaviana Suzulmus matetika i Ismail ary nahafinaritra ny fotoana niarahan'izy ireo. Izany dia mampahatsiahy ny Rashid Khaddege | Daniel Jurdi tranga, raha i Daniel dia hitsidika ny fiainam-pianakaviany taloha. Ny fianakavian'i Khaddege aza dia nitazona kabine na fandriana kelin'i Daniel, mba hahafahany matory mandritra ny fitsidihany.
Fihetsika sy fihetseham-po tamin'ny fiainana taloha: naneho fihetsika mahazatra an'i Abit i Ismail ary mifaly amin'ny fanantonana ilay mpamono olona an'i Abit
Abit Suzulmus dia nanana fahazarana mitafy lamba rongony eny an-tsorony. Nanamboatra io fahazarana io toy ny zaza kely i Ismail ary nanohy nanao ny lamba famaohana teo an-tsorony mandra-paha-sivy taona izy. Ny rain'i Ismail, Mehmet, dia nanamarika ny an'ny zaza 18 izay nananany sy ny vadiny, i Ismail ihany no naneho an'io toetra io.
Araka ny nomarihina teo aloha, dia tsaroan'i Ismail ny fomba nahafahany nisotro toaka niaraka tamin'ireo namany, tahaka an'i Abit. Amin'ny maha-zaza azy, i Ismail dia misotro rano mangingina raki.
Rehefa tapitra ny fe-potoana maromaro tamin'ny famerenana ara-dalàna, Ramazan, ny mpamono an'i Abit farany, dia nahita ny ray aman-drenin'i Ismail fa tena faly sy nitehaka ny tanany tamim-pifaliana izy.
Fitiavana sy fihetseham-po taloha: I Abit sy Sehide dia tafaray indray amin'ny alàlan'ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao
Tsarovy fa i Sehide dia vadin'i Abit, izay novonoina tamin'ny fotoana namonoana an'i Abit. Tonga ny tovovavy iray antsoina hoe Cevriye Bayri ary nilaza fa nahatsiaro ny Sehide.
Ny rain'i Cevriye, izay nahalala ny fisainan'i Ismail fa ny fiverenana indray ao amin'ny vatana vaovao indray Abit, dia nametraka ny zanany vavy sy Ismail hihaona.
Nalamina tao an-tranon'i Bayri io ary rehefa nifankahita voalohany i Ismail sy i Ceviye dia nihazakazaka izy ireo ary nifamihina. Nilaza i Ismail fa te hanambady an'i Ceviye izy ary raha tsy afaka dia ho faty.
The Sehide Suzulmus | Ceviye Bayri Ny tranga momba ny fanambadiana indray no aseho an-tsoratra.
Ian Stevenson nanamarika fa ny Abit Suzulmus | Ny tranga Ismail Altunkalic no iray amin'ireo tsara indrindra amin'ny tranga rehetra momba ny firazanana any Tiorkia. Ity tranga ity dia mampiseho ireo endri-javatra manaraka:
Drafitra fanahy sy fandraisana anjara amin'ny fanahy: Tao anatin'ny nofy iray fanambarana, nisy mpifanila iray tamin'ny fianakaviana Altunkalic dia nanonofy fa ny dikan'ny hoe Abit Suzulmus dia ho teraka indray amin'ny maha-zanaka an'i Nebihe Altunakalic izay toa niseho tokoa. Araka izany dia hita fa ny fanahin'ny Abit dia afaka nifampiresaka fa ho teraka eo akaikiny.
Fahatsiarovana ny fiainana tany am-piandohana: Afaka nitarika ny rainy tany an-tranon'ny Abit Suzulmus i Ismail, izay namono an'i Abit sy Sehide vadiny. Velo-taona i Ismail tamin'ny fotoana nanehoany ny làlana mankany an-tokantranon'i Abit ary tsy mbola nampiseho ny fomba taloha izy.
Fifandraisana ara-pianakaviana navaozina tamin'ny nahaterahan'i Jesosy: Sehide dia vehivavy bevohoka Abit, izay novonoina niaraka tamin'ny Abit. Nisy vehivavy iray antsoina hoe Cevriye Bayri nitatitra fa nahatsiaro ny Sehide. Rehefa nihaona voalohany i Ismail sy Cevriye dia nifamihina izy ireo ary nilaza i Naslov fa hanambady an'i Cevriye. The trangan'ny reincarnation an'i Sehide Suzulmus Cevriye Bayri atolotra misaraka.
1. Stevenson, Ian: Fomba amin'ny karazana fitondran-tena vaovao, Boky III, Roambinifolo roa ao Libanona sy Torkia, University of Virginia Press, 1980, pejy 194
2. Stevenson, Ian: Fahaizana momba ny fomba nahateraka indray, Boky III, Roambinifolo tao Libanona sy Torkia, University of Virginia Press, 1980, pejy 206-220
3. Stevenson, Ian: Fomba amin'ny karazana fitondran-tena vaovao, Boky III, Roambinifolo roa ao Libanona sy Torkia, University of Virginia Press, 1980, pejy 195
4. Stevenson, Ian: Fomba amin'ny karazana fitondran-tena vaovao, Boky III, Roambinifolo roa ao Libanona sy Torkia, University of Virginia Press, 1980, pejy 220
5. Stevenson, Ian: Fomba amin'ny karazana virijiny. Boky III, Roambinifolo Roambinifolo ao Libanona sy Torkia, University of Virginia Press, 1980, pejy 217
6. Stevenson, Ian: Fomba amin'ny karazana fitondran-tena vaovao, Boky III, Roambinifolo roa ao Libanona sy Torkia, University of Virginia Press, 1980, pejy 218